काठमाडौँ, पुस २८ - यस वर्ष थप पाँच जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले समितिले अब तीन महिनाभित्र तनहुँ, गोरखा, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए, आजको गोरखापत्रले खबर छापेको छ ।
यसअघि लागू भएका अन्य जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीले बाँकी पाँच जिल्लामा पनि कार्यक्रम विस्तार गरी लागू गरिने बताए । पुस २८, २०७३ मा प्रकाशित